Ogaden News Agency (ONA) – Mustaqbalka Kurdiyiinta Suuriya oo God-Madoow Kusii Dhacaya.
Mustaqbalka Kurdiyiinta Suuriya oo God-Madoow Kusii Dhacaya.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo in heshiis ku saabsan dhowridda dagaal yahannada Kurdiyiinta ee ku sugan Suuriya lala gaadho dawlada Turkiga, kaddib marka uu Mareykanka isaga baxo halkaasi.
Wuxuu ka hadlayay isagoo ku sugan dalka Imaaraadka Carabta (UAE) isagoo sidoo kale khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa Turkiga. Xoogagga Mareykanka ee ku sugan waqooyiga Suuriya ayaa ka barbar dagaallamayay maleeshiyaadka Kurdiyiinta iyagoo ka dhan ah kooxda Daacish.
Turkiga, ayaa si kastaba, u arka kooxda (YPG) inay yihiin argagixiso wuxuuna wacad ku maray inuu cagta marin doono. Pompeo ayaa booqasho ku maraya Bariga Dhexe, kaddib markii uu madaxweyne Donald Trump ku dhawaaqay bishii hore in ciidammadiisa uu kala baxayo Suuriya.
Pompeo ayaa sheegay inuu la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mevlut Cavusoglu, isagoo intaas ku daray. Toddobaadkii hore, madaxweyne Erdogan ayaa si cadho leh u diiday baaq uga yimid la taliyaha ammaanka ee dalka Mareykanka John Bolton, kaas oo ku aaddanaa dhowridda dagaal yahannada Kurdiyiinta. Wuxuu sheegay in hadalkaasi uu yahay “mid aan la aqbali karin”